Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo ka badbaaday qarax, iyo bileyska oo falkaasi u qabtay labo nin. – Radio Daljir
Janaayo 3, 2011 12:00 b 0
Galkacyo Jan 03 – Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad iyo illaaladiisa ayaa maanta ka badbaaday qarax miino oo lala bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen oo marayey agagaarka Ex xero daraawiish ee magaalada Galkacyo.
Qaraxa lala eegtay guddoomiyaha iyo illaaladiisa oo ahaa miinada nooca ramuudka lagu hago, ayaa ahaa mid aad u xooggan oo si weyn looga dareemay xaafadaha kala duwan ee magaalada Galkacyo, waxaana lagu aasay dhinac galbeed waddo halbawle ah oo ay si aad u isticmaalaan gaadiidka magaaladu.
Labo qof oo rayid ah oo midkood ay tahay qof dumar ayaa qaraxaasi ku dhaawacantay kuwaasi oo marayey agagaarka halka qaraxu ka dhacay, waxaana la tilmaamayaa in ay aad u wanaagsan xaaladdooda caafimaad, sida ay Daljir u xaqiijiyeed dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka guud ee magaalada, halkaasi oo dhaawacooda la geeyey.
Ciidamada ammaanka ee magaalada Galkacyo oo daqiiqado kaddib gaaray halka qaraxu ka dhacay, ayaa xiray dhammaan waddooyinka laga soo galo goobta ay wax ka dhaceen, waxaana ay gacanta ku dhigeen labo nin oo lagu tuhunsan yahay ku lug-lahaansha qaraxaasi.
Gaariga qaraxa lala beegsaday ee ay saarnaayeen guddoomiyaha iyo illaaladiisu ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan kaddib markii ay ku habsadeen dhagxaan iyo firiro ka soo haaday halkii qaraxu uu ka dhacay.
Guddoomiyaha gobolka Mudug Axmed Cali Salaad oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir markii qaraxu dhacay kaddib ayaa noo xaqiijiyey isaga iyo illaaladiisu ay ka bad-qabaan qarax lala-eegtay, waxaana guddoomiyuhu uu ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo sida ay wax u dhaceen.
Dhinaca kale taliyaha qaybta bileyska gobolka Mudug G/sare Aadan Nuur Qaal, oo shir jaraa’id ku qabtay saldhigga dhexe ee magaalada Galkacyo, ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan labo nin oo lagu tuhunsan yahay in ay ku lug-leeyihiin qaraxihii lala bar-tilmaameedsaday guddoomiyaha gobolka, waxaana uu carabka ku dhuntay in ay baaritaan ku hayaan saraashiisha danbi-baaristu.
Waa markii ugu horraysay oo qarax lala bartilmaameedsado mas’uul ka tirsan maamulka gobolka Mudug, waxaana tani ay dib u soo celinaysaa faajignaanta ciidanka ammaanka ee gobolka Mudug oo muddooyinkaan danbe yareeyey hawlgallada iyo baaritaannada la xiriira xoojinta amniga iyo nabadgalyada.